Igumbi eliphindaphindayo le-iconic Van Gogh eArles | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngubani ngekhe uthande ukuntywilisela kuyo nayiphi na loo misebenzi zakudala ukufumana ukuba abo baphambili kubo bangathetha ntoni njengoko kunokwenzeka eLas Meninas yiVelázquez enkulu, okanye nakwenye yeRenoir yokuxuba kunye neempembelelo kunye nezo zinto zemihla ngemihla zoluntu olungqongqo lweRococo.
Ngokuqinisekileyo oku unokukwenza ukuba uqesha igumbi nge-Airbnb. Kwaye, okokuqala e-United States, iinguqulelo ezintathu zomzobo odumileyo waseVan Gogh kwigumbi lakhe eArles ziya kuboniswa eChicago ngaxeshanye neminye imisebenzi yakhe. Ukubhiyozela umsitho, iZiko lobuGcisa laseChicago liphinde lalenza igumbi laza lazidwelisa ukuze ziqeshise kwa-Airbnb nge- $ 10 nje.
Le bhokisi yile omnye wabamele kakhulu Yobungcali bokupeyinta uVan Gogh. Njengoko kubhengezwe yi-Airbnb: «eli gumbi liya kukwenza uzive ngathi uhlala kumzobo. Ihonjiswe ngohlobo lwepost-impressionist, ekhumbuza emazantsi eFrance apho ixesha liyanyamalala. Ifanitshala yayo, imibala eqaqambileyo kunye nobugcisa buza kukunika amava okuphila ayinyani.»
Ngoko ke, ukuba ngamathuba athile obomi uya kuzifumana useChicago ungachitha ubusuku obunomlingo ngokupheleleyo kwigumbi eliphindaphinda omnye womzobi omkhulu eArles. Igumbi liphinde lavuselelwa ngokupheleleyo kwezi zinto zikhubazekileyo kunye nembono ekhethekileyo ukuze oko kuthetha ukuziva ngaphakathi kwepeyinti yakho, njengoko kubonisiwe kwimifanekiso esiyibonisayo kule post.
El ikhonkco kwi-Airbnb kunye nenye ukuya IZiko lobugcisa laseChicago. Inye Isindululo sokuqala kunye nesimangalisayo apho nabani na anokufikelela kwiidola ezilishumi ngaphandle nje kokushiya intywenka ukuze akwazi ukuphupha ubusuku obunye kwigumbi eliphantse lafana nelo lihlala ngumzobi omkhulu waseDatshi.
Ngaphantsi nje konyaka odlulileyo UVan Gogh kolunye ungeno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Amagcisa aphinda enze igumbi lika icon likaVan Gogh eArles
Imyuziyam yedijithali ye-Comic yiwebhusayithi ekhethekileyo apho unokufumana khona ii-comics zommandla woluntu